Prosperer sy Formaprod: ny fambolena sy ny fiompiana ihany … | NewsMada
Prosperer sy Formaprod: ny fambolena sy ny fiompiana ihany …
Mivondrona ao amin’ny kaoperativa Sahamamy ny fianakaviana maro any amin’ny faritra Atsinanana, miofana momba ny fandraharahana. Ampitaina amin’izy ireo ny hananan’izy ireo kolontsaina ho amin’izany fandraharahana izany hiatrehana ny asa fivelomana, izay saika renim-pianakaviana. Mampiofana azy ireo ny tetikasa Prosperer. Maro ny tombontsoa, mampiova ny fiainana andavanandro, miainga avy amin’ny fihariana kely isam-pianakaviana najoro, mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana. Ny fahaiza-manao amin’ireo no nampiofanana azy ireo, araka izay safidiny.
Tanjona ny hampisondrotra ny vola miditra isam-pianakaviana, hampiakatra ny fari piainan’izy ireo, sy hampisandrahaka ny fihariana. Fanirian’ireo mpiofana ny mba hanampiana azy ireo amin’izay tetikasa noraisina tamin’ny fiofanana. Mitondra ny anjara birikiny ny Prosperer hatramin’izay eo amin’ny fambolena sy ny fiompiana fa andrasana kosa ny avy amin’ny minisitera mpiahy. Tsy voatery vola izany fa raha misy ihany ny teknisianina, tsy tokony ho eo ambony latabatra fotsiny.
Manao toy izany koa ny tetikasa Formaprod any amin’ny faritra Ihorombe, manome fiofanana ireo tanora amina sehatra maro, toy ny fiompiana kisoa, akoho, sy ireo voly isan-karazany ho an’ny tsena ao anatiny. Betsaka ny azo atao amin’ny karazana fihariana any Ihorombe, saingy matetika, tsy ampy ny hoenti-manana amin’ireo nahazo fiofanana, ankoatra ny tsy fandriampahalemana lava any ambanivohitra. Noho izany, mila tosika ireo tanora ireo, ary arahi-maso amin’izay asa nosafidiny. Ny fambolenna sy ny fiompiana ihany no antoka hiadiana amin’ny fahantrana eto Madagasikara amin’izao taonjato izao.
Prosperer : Programme de soutien aux pôles de micro-entreprises rurales et aux économies régionales
Formaprod : Formation professionnelle et d’amélioration de la productivité agricole